Delta inovhenekera nyowani yakatsaurirwa TSA Precheck lobby, kudonha kwebhegi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta inovhenekera nyowani yakatsaurirwa TSA Precheck lobby, kudonha kwebhegi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Delta inovhenekera nyowani yakatsaurirwa TSA Precheck lobby, kudonha kwebhegi.
Chiitiko chitsva chekuzivikanwa-chinogonesa kumeso muAtlanta chinopa maoko- uye-isina mudziyo nyore kune vafambi kubva kunzira kuenda kugedhi.
Kufamba kuburikidza neHartsfield-Jackson Atlanta International Airport kuchave nyore kune vatengi veDelta vakanyoresa muTSA PreCheck kutanga mwedzi unouya.
Delta Air Lines inovhura yekutanga-yakambogara Delta-TSA PreCheck inotaura nzvimbo yekutandarira uye kudonha kwebhegi.
Vatengi vane zvese zviri zviviri Fly Delta app uye nhengo yeTSA PreCheck vachakwanisa kushanyira bhegi nyowani yekudonhedza bhegi padanho rezasi reAtlanta's Domestic South Terminal.
Delta Air yakazivisa kuti kutanga mwedzi unouya, tichifamba Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ichave iri nyore kune vatengi veDelta vakanyoresa muTSA PreCheck, nekuwedzera kwehunyanzvi hwekucherechedzwa kwechiso uye kuvhurwa kwekutanga-kumboitwa Delta-TSA PreCheck express lobby uye kudonha kwebhegi.
Vatengi vane zvese zviri zviviri Fly Delta app uye nhengo yeTSA PreCheck vachakwanisa kushanyira bhegi nyowani yekudonhedza bhegi padanho rezasi reAtlanta's Domestic South Terminal, vopfuura nepanzvimbo yekutarisa, vokwira ndege yavo pagedhi vachishandisa yavo chete. “digital identity” (inoumbwa nenhamba yemutengi yeNhamba yeSkyMiles, nhamba yepasipoti uye Inozivikanwa Mufambi Nhamba). Vatengi vakasununguka kufamba kubva kunzira kuenda kugedhi, maoko akazara- uye mudziyo-isina.
"Tinoda kupa vatengi vedu nguva yakawanda yekunakidzwa nekufamba nekuvhura zvakareruka, zvisina musono uye zvinoshanda kubva kumagumo kusvika kumagumo," akadaro Byron Merritt, Mutevedzeri weMutungamiriri weDelta weBrand Experience Design. “Delta Air anga ari mutungamiri mukuyedza nekushandisa tekinoroji yekuziva kumeso kubvira 2018 sechikamu chechiono chedu chekuvaka nhandare dzendege dzisingashande. Kutanga kwe Atlanta's Express lobby uye kudonha kwebhegi ndiro danho rekupedzisira mukuzvipira kwedu mukuteerera nekugadzira zvinhu zvitsva kune vatengi vedu. "
Heano maitiro matsva eDelta anorerutsa mafambiro kuburikidza neatatu airport touchpoints muAtlanta: